Ruo ihe karịrị afọ iri, Google na-alụ ọgụ megide akụkọ ifo nke ntaramahụhụ ọdịnaya abụọ ahụ. Ebe ọ bụ na m ka na-aga n’ihu ịza ajụjụ na ya, echere m na ọ ga-aba uru ikwurita okwu ebe a. Nke mbụ, ka anyị tụlee verbiage ahụ:
Ka anyi tinye ihe a n’elu akwa ozigbo, ndi be anyi: O nweghi ihe dika “ntaramahụhụ ọdịnaya abụọ” Ma ọ́ dịghị ihe ọzọ, ọ bụghị n'ụzọ ọtụtụ ndị si ekwu mgbe ha kwuru ya.
Yabụ enweghị ntaramahụhụ na Google ga-ahọrọ nsụgharị iji gosipụta, gịnịzi mere ị ga-eji mee ya zere ọdịnaya abụọ? N’agbanyeghi na enweghi ntaramahụhụ, gị nwere ike ka na-ewute ikike gị ịkwado nke ọma. Nke a bụ ihe kpatara ya:
Ogologo ibe ọ bụla dabere na backlinks dị mkpa nye ha na saịtị ndị dị na mpụga. Ọ bụrụ na ị nwere peeji 3 nwere ọdịnaya yiri (ma ọ bụ ụzọ atọ n'otu peeji ahụ), ịnwere ike ịnwe backlinks na ibe ọ bụla karịa backlinks niile na-eduga otu n'ime ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị na-emebi ikike gị ịnwe otu ibe na-achịkọta backlinks niile na ogo ka mma. Inwe ogo otu peeji na nsonaazụ kachasị dị mma karịa peeji 3 na peeji nke 2!
Na ndị ọzọ… ma ọ bụrụ na m nwere 3 peeji nke na oyiri ọdịnaya na onye ọ bụla n'ime ha nwere 5 backlinks ọ bụla… ọ gaghị ọkwá nakwa otu peeji nke 15 backlinks! Oyiri ọdịnaya pụtara na ibe gị na-asọ mpi ibe ya ma nwee ike na-ewute ha niile kama ịkwalite otu peeji nke ukwuu.
Not na-adịghị aghọ aghụghọ na rewriting ọdịnaya iji hazie ya maka dị iche iche onye, ​​ọ bụ nnọọ ihe na-anabata ikpe nke ọdịnaya abụọ. Nke a bụ ndụmọdụ m:
Tinye ọdịnaya Pụrụ Iche - Ọ bụ ezie na enwere ike ịmegharị nnukwu ihu nke ibe ahụ, m ga-etinye ụlọ ọrụ ahụ na isiokwu nta, eserese, eserese, vidiyo, nlebara anya, wdg. Iji hụ na ahụmịhe ahụ pụrụ iche ma lekwasị anya maka ndị na-ege ntị.
Ọ bụrụ na ị na-enye ọrụ 8 nri gị na ọrụ gị ma tinye peeji 8 ndị a na URL pụrụ iche, aha, nkọwa meta, na oke pasent (eriri afọ m na-enweghị data bụ 30%) nke ọdịnaya pụrụ iche, ị gaghị agba ọsọ ihe ize ndụ ọ bụla nke iche echiche Google na ị na-anwa iduhie onye ọ bụla. Na, ma ọ bụrụ na ọ bụ a na-ọma-e peeji nke na mkpa njikọ… ị nwere ike ọkwá ọma na ọtụtụ n'ime ha. Enwere m ike itinye akwụkwọ nne na nna na nyocha nke na-eme ka ndị ọbịa gaa peeji dị n'okpuru maka ụlọ ọrụ ọ bụla.
Fọdụ n'ime ihe atụ kachasị njọ nke ọdịnaya abụọ m na-ahụ bụ ubi SEO nke na-ewe ma depụtakwa ibe na mpaghara ọ bụla nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na-arụ ọrụ. centric peeji ebe ha nanị dochie aha obodo ahụ na aha, meta nkọwa na ọdịnaya. Ọ na-arụ ọrụ… ndị niile na peeji nke họọrọ adịghị mma.
Ejila edemede dị mfe ma ọ bụ mkpụrụ osisi edochi edochi iji dochie mkpụrụokwu dịka this na-arịọ maka nsogbu ọ naghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na m bụ roofer nke na-ekpuchi obodo iri na anọ… Ọ ga-akara m mma ịnwe njikọ na mkpọtụ sitere na saịtị mgbasa ozi, saịtị ndị mmekọ, yana saịtị obodo na-atụ aka na peeji nke ụlọ m. Nke ahụ ga - eme ka m bụrụ onye ọnụọgụ ma enweghị oke njedebe ole isiokwu mkpokọta obodo m nwere ike ịhazi maka otu ibe.
N'ezie, enwere ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ike multiple ọnọdụ peeji nke nwere pụrụ iche na mkpa ọdịnaya nile iji hazie ahụmahụ, nke ahụ abụghị aghụghọ… nke ahụ ahaziri. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ njegharị obodo… ebe ọrụ ahụ bụ otu, mana enwere ọtụtụ ọdịiche na ahụmịhe nke ala nwere ike ịkọwapụta na nkọwa na nkọwa.
Canonical - Njikọ njikọ akwụkwọ bụ ihe metadata dị na ibe gị nke na -agwa Google na ibe ahụ nwere oyiri na ha kwesịrị ilele URL dị iche maka isi mmalite nke ozi ahụ. Ọ bụrụ na ịnọ na WordPress, dịka ọmụmaatụ, ma chọọ imelite ebe Canonical URL, ị nwere ike iji nke a mee ya Ọkwa Math SEO ngwa mgbakwunye. Tinye URL nke sitere na canonical na Google ga-asọpụrụ na ibe gị abụghị nke oyiri na mmalite kwesịrị otuto. Ọ dị ka nke a:
Tags: Mgbakwunyeikepeeji obodopeeji nke countyọdịnaya abụọoyiri ọdịnaya ntaramahụhụobodo seopeeji nke dabere na peeji nkeọtụtụ-ọnọdụotutu ebeakụkọ ifonoindexnyocha ọchụchọnhazi ọchụchọogoNtuziakarobots.txtAomume kacha mmaakụkọ ifoezuru ọdịnaya